လှိုင်သာယာရှိရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်များ | iMyanmarHouse.com
FMI City လုံးချင်းအရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10141367 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10141288 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10141242 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09987922969, 09450035345, 09259636087
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10141082 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့ FMI City အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ ကားပါကင်ပါ လုံးချင်း အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10140862 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10140311 အတွက် စည်တော်ကြီး အိမ် ခြံ မြေ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
FMI အိမ်ယာတွင် အိပ်ခန်း(၄)ခန်းဖွဲ့ထားသော (40x60) 2RC လုံးချင်းတိုက်သန့် (ညှိနှိုင်း)ဖြင့် ရောင်းရန်ရှိသည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10134806 အတွက် Shwe Naing Lin Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
#လုံခြုံရေးအထူးကောင်းမွန်ပြီး_ကျယ်ဝန်းသောပတ်ဝန်းကျင်_စိမ်းစိုလှပသောမြက်ခင်းကျယ်အလှ #ရေကန်Viewအလှတို့ကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက် ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာရှိ လုံးချင်းအိမ်အသစ်ရောင်းမည်...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10124182 အတွက် Soe Kabar Real Estate Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
FMI City အိမ်ရာအတွင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ လုံးချင်း၂ထပ်တိုက် ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10116051 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မြေ(1.123)ဧက၊ဂို(18500sqft) လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်တွင် ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10107365 အတွက် Koe Kant Hwar Kway Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်